The Boys (Season 2) ၊ အပိုငျး (၆) | MM Movie Store
The Boys (Season 2) ၊ အပိုငျး (၆)
ဒီစီးရီးက season 1 မှာ အပိုငျး(၈)ပိုငျးထှကျရှိထားပွီးသလို တငျလညျးထားပွီးပါပွီ….
ဇာတျလမျးတှဲအညှနျးက ထှထှေထေူးထူးတော့ထပျပွောစရာမရှိဘူး…စူပါ ပါဝါရွပီး လူတှကေိုအကြိုးပွုနတေဲ့ Hero တှရှေိသလို အနိုငျ့ကငျြပွီး ကိုယျကြိုးအတှကျအသုံးခနြတေဲ့ သူရဲကောငျးဟနျဆောငျထားတဲ့ မိစ်ဆာလိုကောငျတှလေညျးအမြားကွီးရှိပါတယျ…
ဒီလိုကောငျတှကွေောငျ့ တဈခြို့သောသူတှေ အမြားစှာထိခိုကျနပေမေယျ့လညျးSupervillain လိုကောငျတှဟော အငျအားကွီးတာရော အဖှဲ့အစညျးတဈခုအနနေဲ့ရှိနတောရောထောကျခံနတေဲ့သူတှမြေားနတောကွောငျ့ ဒေါသတှကေိုမွိုသိပျနရေတဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ…
ဒီအထဲမှာမှ ဘဝက သလေညျးမထူးဘူး …ဒီလိုစူပါပါဝါရနတေဲ့ အရူးတှကေို ရသလောကျပွနျသတျမယျဆိုပွီးThe Boys ဆိုတဲ့အဖှဲ့အစညျးလေးပျေါပေါကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့….SE1 ထဲက ရှယျကွမျးသလို SE2 မှာလညျးပိုတောငျကွမျးလာပါတယျ…ဒီစီးရီးက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာက
ကြှနျတျောတို့မွငျတှနေ့ကွေ ကိုးကှယျရတဲ့စူပါဟီးရိုးတှမေဟုတျဘဲ ဗီလိနျကောငျတှကေို လိုကျဗငျြးပွီးအားနညျးနတေဲ့အဖှဲ့လေးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ တဈသားထဲအလိုလိုဖွဈသှားပါတယျ…ပွီးတော့
ဗီလိနျစူပါပါဝါကောငျတှရေဲ့အားနညျးခကျြတှကေို လိုကျရှာပွီး ဗငျြးဖို့လိုကျစဉျးစားရတာလညျးတျောတျောစိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ…အကျရှငျခနျးတှေ ဘယျလောကျမိုကျပွီး
ဒီစီးရီးက season 1 မှာ အပိုင်း(၈)ပိုင်းထွက်ရှိထားပြီးသလို တင်လည်းထားပြီးပါပြီ….
ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်းက ထွေထွေထူးထူးတော့ထပ်ပြောစရာမရှိဘူး…စူပါ ပါဝါရြပီး လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ Hero တွေရှိသလို အနိုင့်ကျင်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချနေတဲ့ သူရဲကောင်းဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မိစ္ဆာလိုကောင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်…
ဒီလိုကောင်တွေကြောင့် တစ်ချို့သောသူတွေ အများစွာထိခိုက်နေပေမယ့်လည်းSupervillain လိုကောင်တွေဟာ အင်အားကြီးတာရော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာရောထောက်ခံနေတဲ့သူတွေများနေတာကြောင့် ဒေါသတွေကိုမြိုသိပ်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်…
ဒီအထဲမှာမှ ဘဝက သေလည်းမထူးဘူး …ဒီလိုစူပါပါဝါရနေတဲ့ အရူးတွေကို ရသလောက်ပြန်သတ်မယ်ဆိုပြီးThe Boys ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့….SE1 ထဲက ရှယ်ကြမ်းသလို SE2 မှာလည်းပိုတောင်ကြမ်းလာပါတယ်…ဒီစီးရီးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက
ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ ကိုးကွယ်ရတဲ့စူပါဟီးရိုးတွေမဟုတ်ဘဲ ဗီလိန်ကောင်တွေကို လိုက်ဗျင်းပြီးအားနည်းနေတဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်သားထဲအလိုလိုဖြစ်သွားပါတယ်…ပြီးတော့
ဗီလိန်စူပါပါဝါကောင်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကို လိုက်ရှာပြီး ဗျင်းဖို့လိုက်စဉ်းစားရတာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်…အက်ရှင်ခန်းတွေ ဘယ်လောက်မိုက်ပြီး
(Yoteshin Drive) Large Size ~ Download
(Yoteshin Drive) Small Size ~ Download
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၄)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၃)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၂)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၁)
Mr. Robot (Season 3) အပိုငျး (၁၀)
Mr. Robot (Season 3) အပိုငျး (၉)
Young Aunt – Link 1
The Good Doctor (Season 3) ၊ အပိုငျး (၄)